ပါဝါမောအိပ်တာဘယ်လောက်ကြာမလဲ? | Santotoro
Power naps အသစ်များလည်းမရှိပါ။ အနုပညာရှင်ဆာဗေးဒေါဒါလီကသူ၏မှတ်စုတိုတွင်သူသည်ပန်းကန်တစ်ခုပေါ်တွင်ကိုင်ထားသည့်လက်၌သော့တစ်ချောင်းကိုင်ထားပြီးထိုင်ခုံပေါ်တွင်ထိုင်မည်ဟုရေးသားခဲ့သည်။ သူအိပ်ပျော်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သော့သည်လဲကျသွားပြီးသူ့ကိုနှိုးလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်အလုပ်လုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။ ၂၆ မိနစ်သည်နိုးကြားမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ရန် NASA မှအကြံပြုထားသည်။ ဒါဟာကြီးသောစိတ်ကိုရောနှောထင်ပုံရသည်။
ငါအားသွင်းခြင်းအားနာရီပေါင်းများစွာကြာအောင်အိပ်မောကျခြင်းအဖြစ်စဉ်းစားခဲ့ဖူးသော်လည်းမိနစ် ၉၀ ခန့်အိပ်စက်ခြင်းဖြင့်အိပ်မည်ဟုစဉ်းစားသည်၊ သင်၏တစ်နေ့တာမှနာရီအနည်းငယ်ယူပြီးသင့်အားယခင်ကထက် ပို၍ groggy ခံစားမိစေနိုင်သနည်း။ ဘာတွေလဲ
“ ပထမ ဦး စွာ၊ လိုအပ်သောအိပ်စက်ခြင်း၊ လူမှုရေးမှေးမှိန်ခြင်းနှင့်ပါဝါငုပ်ခြင်းများကိုခွဲခြားရန်အရေးကြီးသည်” ဟုပူးတွဲတည်ထောင်သူပါမောက္ခ Colin Espie ကဖော်ပြသည်။Sleepio.
အချို့ခဏတာမှေးစက်ခြင်းသည်အခြားသူများထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်ဟုထင်ရသည်။
လူတစ် ဦး သည်အလွန်အိပ်ချင်ကြောင်း၊ အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်ကိုအိပ်ချင်နေကြောင်းသိသောအခါဥပမာ – ကားမောင်းနေစဉ်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသည့်နေရာ၌လိုအပ်သည့်အိပ်ငိုက်နေခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဤကိစ္စရပ်များတွင်လူတစ် ဦး သည်အမြဲတမ်းတာ ၀ န်ယူမှုရှိသင့်သည်။ အခြားသူများက (ဥပမာ၊ siesta) အတူတူပင်လုပ်ကိုင်ကြပြီးတစ်နေ့တာတွင်အနားယူရန်လိုအပ်သည်ဟုသူကဆက်ပြောသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ power nap ဟာတစ်နေ့တာမှာ reboot လုပ်ဖို့သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
Surrey တက္ကသိုလ်ကျန်းမာရေးစိတ်ပညာပါမောက္ခ Mark Cropley က “ မိနစ်နှစ်ဆယ်မျှသည်အာရုံကြောစနစ်ကိုပိတ်ပြီးတစ်ကိုယ်လုံးကိုအားပြန်ပြည့်စေရန်လုံလောက်သည်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ မိနစ် ၃၀ ထက်မကသင့်အားအိပ်မောကျစေပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသာလွန်လိမ့်မည် ရေတိုအကျိုးအမြတ်။
သို့သော် Espie က ၅ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်နားပြီးမောပန်းခြင်းမှအနားယူနိုင်သည်။
ထိထိရောက်ရောက်ဖြင့်၎င်းသည်အလုပ်မှခေတ္တရပ်တန့်စေနိုင်သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်သင်သည်အားအင်မောစွာအိပ်နေလျှင်၊ နေ့လည်စာစားပြီးနောက်ညနေ ၁ နာရီမှ ၃ နာရီထိကျွန်ုပ်တို့၏နိုးနိုးကြားကြားရှိသည့်သဘာဝကျသည့်အချိန်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ – နှင့်ညနေ4နာရီမတိုင်မီ “
ငါတို့ရွေး ပါဝါမောအိပ်တာဘယ်လောက်ကြာမလဲ? အားလုံးကိုကြည့်ရန်
အကယ်၍ သင်သည်မိဘအသစ်တစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင်၏ကလေးများအားအိပ်မောကျစေခြင်းဖြင့်အရာများကိုပြီးမြောက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်သင်ကိုယ်တိုင်စွမ်းအားဖြင့်အားဖြည့်ခြင်းကကမ္ဘာကြီးအားထူးခြားမှုကိုဖြစ်စေပြီးသင့်ကို ပို၍ လန်းဆန်းစေပြီးအားအင်ဖြစ်စေသည်။
“ သင်ကအိပ်မောကျနေပြီးသင်၏မျက်လုံးများကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားနေပါကနေ့လည်ခင်းတွင်အိပ်မောကျလျှင်နိုးနိုးကြားကြားရှိခြင်းနှင့်သင့်စိတ်ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်” ဟု Espie ကအာမခံသည်။ ဒါပေမယ့်နိုးနိုးကြားကြားရှိနေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အတွက်အိပ်ငိုက်တာကို ‘power nap’ မဟုတ်ဘဲ ‘လိုအပ်သောအိပ်ခြင်း’ လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။
“ အိပ်စက်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အတိုင်းအိပ်တာကိုပိတ်ထားရမယ့်ကုန်စည်မဟုတ်ပါ။ ညအိပ်စက်ခြင်းအတွက်လိုအပ်ချက်ကို Naps တွေကအစားမထိုးပါဘူး။
သင်၏အိပ်စက်ခြင်းအပြုအမူကိုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာသင်နိုးရန်လိုအပ်သည့်အချိန်ပေါ် မူတည်၍ မည်သည့်အချိန်တွင်အိပ်ရာဝင်ရမည်ကိုစီစဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နက်ရှိုင်းသောအိပ်ချိန်တွင်စက်ဝိုင်းလည်ပတ်မှုနှိုးမည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေပြီး၎င်းသည်အိပ်စက်ခြင်းခလုတ်ကို ပို၍ ထိရန်သင့်အားထားနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်နက်ရှိုင်းသောသို့မဟုတ်နှေးကွေးသောအိပ်ပျော်နေသောအချိန်၌အိပ်ပျော်။ နှိုးပါကအပြည့်အဝနိုးကြားခြင်းမတိုင်မီနိုးထရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။ ၎င်းကို ‘အိပ်ပျော်ခြင်း inertia’ ဟုခေါ်သည်။ မောအိပ်တယ် “ ဟုသူကရှင်းပြသည်။
သတိရပါ၊ အကယ်၍ သင်သည်အိပ်စက်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ရှည်လျားသောအချိန်ကာလများကိုပုံမှန်ခဏခဏအိပ်နေခြင်းကိုတွေ့ရှိပါက၎င်းသည်အိပ်မောကျခြင်းမဟုတ်တော့ပါ။ Espie ကဒီဟာကိုစုပေါင်းအိပ်စက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်၊ ဒါကညအချိန်မှာသင်လုံလုံလောက်လောက်မရဘူးဆိုတာပါပဲ။
pod-like အခန်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော Capsule ဟိုတယ်များသည်ဂျပန်ရှိအလုပ်များသောအလုပ်သမားများအတွက်ဆယ်စုနှစ်များစွာရေပန်းစားသည်။ အလားတူပင် ‘ဘားဘားများ’ သည်ကမ္ဘာအနှံ့ပေါ်ပေါက်လာပြီးမြို့ပြလုပ်သားများကိုနှစ်နာရီအထိအနားယူစေသည်။ အလုပ်များသောလူနေမှုပုံစံသည်ပုံမှန်ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှအချို့သောကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ ၀ န်ထမ်းများအားရုံးခန်းတွင်မိနစ် ၂၀ အားသွင်းရန်ခွင့်ပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုပင်စမ်းသပ်နေရာချကြသည်။ သို့သော်ဤအရာသည်သင့်ကိုနေ့စဉ်နှင့်အမျှမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မည်နည်း။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်နေ့တာအတွင်းအလွန်အမင်းအိပ်ချင်ပါက၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်များသည် (ဥပမာအားဖြင့်ကုန်တင်ယာဉ်မောင်းများ) သတိရှိရန်လိုအပ်လျှင်၊ ၎င်းသည်ခဏအိပ်ခြင်းထက်လိုအပ်သောအိပ်ငိုက်ခြင်း၏ဥပမာသာဖြစ်လိမ့်မည်။ Espie ကပြောပါတယ်။
“ ကားမောင်းခင်အိပ်ချင်စိတ်ကိုလျှော့ချဖို့လိုလာရင် ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်အထိခဏမသောက်ခင်ကော်ဖီတစ်ခွက်သောက်သုံးခြင်းဟာနိုးကြားမှုအတွက်နိုးနိုးကြားကြားရှိစေတယ်” လို့သုတေသနကဆိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါက ၁၅ မိနစ်ကနေ ၂၀ မိနစ်အကြာမှာကဖိန်းဓာတ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကကဖိန်းဓာတ်ဖြည့်တင်းမှုအရှိန်ကိုပြန်ရစေတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်အမြဲတမ်းပင်ပန်းနေလျှင်၊ နောက်ခံအကြောင်းတစ်ခုရှိနိုင်သည်။ လိုအပ်သောခဏတာမှေးမှိန်သွားသောအခါစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ခြင်းကဲ့သို့သောနောက်ကွယ်ရှိအကြောင်းရင်းများကိုဆန်းစစ်ရန်အရေးကြီးသည်။
သူကအိပ်မပျော်တဲ့ညမှာအိပ်မပျော်တာ၊ ကျန်းမာရေးမကောင်းတာ၊ ဒါမှမဟုတ်ကုသမှုလိုချင်တဲ့အိပ်စက်ခြင်းရောဂါရှိတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။
Espie သည်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာသုတေသနကို အခြေခံ၍ အိပ်မပျော်သည့်သူများအတွက်သိမြင်မှုဆိုင်ရာအမူအကျင့်ဆိုင်ရာကုထုံး (CBT) ကိုအကြံပြုထားသည်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အိပ်စက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်နှင့်တိုတောင်းသောဆက်တိုက်ဖြစ်နေရန်အမြဲတမ်းလိုချင်ပါက၊ သင် polyphasic အိပ်စက်ခြင်းသည်သင့်အတွက်အလုပ်ဖြစ်မဖြစ်စဉ်းစားနိုင်သည်။
ဒီလိုအလွန်အမင်းအိပ်စက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုမစဉ်းစားခင်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ရန်လိုသည်။ ညနေပိုင်းအချိန်တစ်ချိန်ချိန်လွန်ပြီးနောက်တွင်သင်၏အီးမေးလ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်နည်းပညာအသုံးပြုခြင်းကိုကန့်သတ်ထားရန်ကြိုးစားပါ။ အကယ်၍ သင်သည်သဘာဝအလင်းများစွာနှင့်တစ်နေရာရာတွင်အလုပ်မဖြစ်ပါကသင်သည် SAD ဆီမီးခွက်တွင်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်တစ်နေ့လုံးစိတ်ဓါတ်များနှင့်စွမ်းအင်ပမာဏအပေါ်သိသာသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။
“ အိပ်စက်ခြင်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုကတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပုံမှန်အချိန်ဇယားကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ လူအချို့အတွက်ဒီဟာက napping ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေအတွက်တော့အဲဒါကသင့်အတွက်အသုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူး” ဟုဆိုသည် Espie ။
“ ဒါပေမယ့်ညအိပ်စက်ခြင်းကို ဦး စားပေးဖို့အစားထိုးစရာမလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့်အိပ်စက်ခြင်းကိုတိုတောင်းတဲ့ပြောင်းလဲမှုအတွက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီခဏတာအိပ်စက်ခြင်းကိုအသုံးမပြုတဲ့အလေ့အထကိုအသုံးမပြုမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ငါစွမ်းအင်ခဏတာမှေးမှိန်ခြင်းကိုအထူးသဖြင့်ထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး” ဟုသူကသတိပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ။
ထို့အပြင်သင်အိပ်မပျော်သည့်ရောဂါခံစားနေရပါကနေ့ခင်းဘက်၌ခဏအိပ်ခြင်းသည်အိပ်ရာဝင်ချိန်တွင်အိပ်စက်ခြင်းကိုလျော့နည်းစေနိုင်သဖြင့်ရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ အကယ်၍ သင်၌အိပ်မပျော်လျှင်၊ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နာရီကိုထပ်တူကျခြင်းမှရှောင်ရှားရန်လိမ်လည်မှုများကိုရှောင်သင့်သည် – စိတ်မကောင်းပါ!